कसरी घर र कार्यालय को लागि नेतृत्व छत प्रकाश बिल स्थापना गर्न। प्रकार र लाभ
निर्मित, माउन्ट वा सतह रोशनी झन् आफ्नो स्थायित्व र दक्षता कारण मात्र घरहरू, तर पनि कार्यालय प्रकाश लागि प्रयोग गरिन्छ एलईडी। यो कार्यालय वा उद्यम मा कामदारहरूको को उत्पादकत्व असर किनभने उचित प्रकाश, लागत भन्दा बढी महत्त्वपूर्ण हुँदै गईरहेको छ।
प्रकाश स्रोतहरु को सबै भन्दा लोकप्रिय प्रकार को एक बिल छ downlight एलईडी। यसको मुख्य लाभ निम्न छन्:
कुनै पनि सामाग्री (plasterboard, पाना, ठोस) को सतह स्थापना को संभावना;
छत शून्य बचत;
भौतिक निलम्बित छानो कुनै तात्दै;
शरीर अक्सर भित्री सजावट रूपमा सेवा गर्दैछन्।
घर को लागि एलईडी दीपक छत सतह यस्तो झाड वा plafonerov रूपमा बिन्दु, रेखापुंज छन्।
नेतृत्व दीपक को सुविधाहरू
एल ई डी को स्थायित्व प्रकाश स्रोतहरु को सबै प्रकार बीचमा उच्चतम छ। न्यूनतम शक्ति र चमकीले प्रवाह खपत गर्दा एकदम शक्तिशाली र झिलमिलाना-मुक्त छ। एलईडी दीपक लागि हुनत यो आवश्यक छ यदि लेंस सेट गर्न सम्भव छ, प्रकाश निर्देशन द्वारा विशेषता छन्। जब यो केहि दक्षता कम छ।
यो खातामा nuances धेरै लिन आवश्यक छ देखि दीपक को प्रत्येक प्रकार को आवास, व्यक्तिगत रूपमा डिजाइन गरिएको छ। एकै समयमा, निर्माता उपकरणको विश्वसनीयता वृद्धि र प्रकाश गुणस्तर सुधार गर्न प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ। सबैभन्दा विकल्प लागू जुडनार छत एलईडी उपरि राउन्ड। तिनीहरूले निर्माण गर्न सस्ता छन् र कुनै पनि योजना को परिसर लागि उपयुक्त छन्।
अन्य लोकप्रिय सरल ज्यामितियआकार। माउन्ट luminaire वर्ग छत सतह एलईडी पहिले सार्वजनिक भवनहरु मा ज्यादातर प्रयोग। अब यसलाई सजिलै देश घरहरू वा अपार्टमेन्ट मा स्थापित छ। साधारण आकार मोडेल मुख्यतया उचित मूल्य र धेरै आंतरिक प्रयोगको को संभावना आकर्षित।
एलईडी दीपक को लागत
दीपक एलईडी छत बिल मा, मूल्य दीपक अन्य प्रकार भन्दा धेरै उच्च छ। त्यसैले, तपाईं एक उत्पादन विश्वसनीय निर्माता खरिद गर्नुपर्छ। मूल्य एल ई डी बढ्छ को संख्या रूपमा, शक्ति मा निर्भर गर्दछ। यसरी, एएसडी समूह 3.5 वाट लायक 72 rubles को बत्ती र 24 डब्ल्यू - 473 rubles। यसलाई विस्तार कार्यक्षमता लागि भुक्तानी गर्न आवश्यक पनि छ। उदाहरणका लागि, dimmable दीपक खतरा कम्पनी 32 वाट लायक 2345 rubles एलईडी।
लाभ मूल्य र प्रदर्शन को लागि विकल्प को एक किसिम को उज्यालो स्रोत चयन गर्न सक्ने क्षमता छ। गुणस्तर दीपक पर्याप्त सभ्य छत बिल "आर्मस्ट्रांग" को 600x600 36 वाट 1490 rubles को लागि खरिद गर्न सकिन्छ एलईडी।
मनमा पनि त्यो सस्तो उत्पादन जाली गर्न सकिन्छ। प्रायजसो को घोषणा प्रदर्शन अनुरूप तिनीहरूले छन्।
जीवित कोठा, बेडरूम, भान्सा, बाथरूम: तपाईं कुनै पनि कोठा लागि सही मोडेल चयन गर्न सक्नुहुन्छ। तर दीपक अन्य प्रकार संग तुलना, अक्सर स्थापना गर्न रुचि spotlights एलईडी। छत सतह मोडेल एउटा सानो ठाउँ कब्जा र "खान" गर्छन् स्पेस अतिरिक्त राशि।
तिनीहरूले छेउमा केही टुक्रा पक्ष सेट वा भित्री सुरुचिपूर्ण बनाउन, कोठा भर वितरित छन्।
मोडेल एलईडी बल्ब एकल रूपमा साथै किरा को रूप मा निर्मित छन्। छत rotatably लगे भनेर प्रकाश को दिशा समायोजन गर्न अनुमति दिन्छ। प्रत्येक बल्ब को स्थिति नियमन त्यसैले तिनीहरू अक्सर गर्छन्।
प्लास्टिक, धातु, गिलास, क्रिस्टल, र अरूलाई: को भित्री तमाम शैली कायम राख्न त्यहाँ spotlights को निर्माण को लागि सामाग्री खत्म को एक विस्तृत विकल्प छ।
आफ्नै हातले स्थापना को सुख;
सजावटी उत्पादनहरू बीच ठूलो विकल्प;
प्रकाश क्षेत्र, प्रकाश र रंग महत्तव सिर्जना सिर्जना गर्न सक्ने क्षमता।
सामान्यतया किनभने आफ्नो उच्च लागत को सामान्य प्रकाश लागि एलईडी दीपक लागू गर्न सिफारिस गरिएको, तर यस्तो भेद पनि सम्भव छ।
छत दीपक पर्खाल र तल्ला थप लोकप्रिय कारण तिनीहरूले थप वर्दी र उचित प्रकाश सिर्जना गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने तथ्यलाई गर्न। छत embodiment प्राथमिकताको लगभग सबै क्षेत्रमा एक मुख्य रोशनी रूपमा प्रयोग गरिन्छ। तर आवासीय लागि प्राय निम्न लाभ संयोजनमा माल झूमर रुचि:
एक वा धेरै दीपक संग डिजाइन कार्यान्वयन को एक ठूलो विविधता।
धेरै dowels वा स्क्रू सजिलो स्थापना। धेरै मोडेल विशेष एंकरिंग संरचना संग सुसज्जित छन्।
क्लासिक झूमर सबै अपार्टमेन्ट छैन हङ गर्न सकिन्छ रूपमा, कम छत संग कुनै पनि कोठा मा प्रयोग गर्नुहोस्।
मूल्यहरु को सबै विभाग को विकल्प।
एल ई डी संग उपरि दीपक निलम्बित छत मा प्रयोग गरिन्छ। तिनीहरूले साना गर्मी फेंकना र धेरै सुन्दर छन्। क्रिस्टल को विशेष गरी विभिन्न मोडेल, LED लाइट स्रोतहरू एक सजावटी प्रभाव सिर्जना जो।
Chandelier सधैं केन्द्र मा अवस्थित छ। कोठा को परिधि साथ यो रोशनी थपियो। चयन गरिएको गर्दा एलईडी दीपक, छत, उपरि राउन्ड क्लासिक एक, conspicuous र सजिलै कुनै पनि भित्री लागि समायोजित छैनन्। तिनीहरूले कुनै पनि आकार को स्पेस मा फिट र सपिङ्ग मल, कार्यालय र सार्वजनिक क्षेत्रमा प्रयोग कुनै तामझाम साथ एक सरल डिजाइन मा।
उच्च संकल्प spotlights फरक Plafonery। यहाँ दीपक एक वा बढी हुन सक्छ। ती सबै एक बबल बन्द छन्। Plafonery विशेष रूप झूमर असम्भव झुन्डियो जहाँ कम ceilinged कोठा प्रभावकारी। दीपक यस प्रकारको सजिलै स्थापित र डिजाइन को एक ठूलो विविधता छ छ। डिजाइनर धातु आवास संग उपकरण स्थापना गर्न सिफारिस - तिनीहरूले, टिकाऊ विश्वसनीय र लामो सेवा गर्छन्।
रेखापुंज उपरि रोशनी
सतह माउन्ट downlight नेतृत्व झन् कहाँ महत्त्वपूर्ण ऊर्जा बचत र तीव्र प्रकाश आवश्यक ठूलो कार्यालय र सार्वजनिक क्षेत्रमा, मा प्रयोग गरिन्छ। रेखापुंज मोड्युलहरू एक उच्च प्रकाश तीव्रता र reflector (दर्पण वा सेतो) को उपस्थिति द्वारा विशेषता छन्। उहाँले विभिन्न आकार हुन सक्छ: पैराबोलिक, वी आकारको, आदि
छत सतह रेखापुंज घर लागि एलईडी luminaires पनि कम प्राय albeit, लागू हुन्छ। तिनीहरूले ठूलो र उच्च रिक्त लागि उपयुक्त छन्।
उपकरणहरू दीपक अन्य प्रकार को भन्दा ठूलो तौल छ। तिनीहरूले प्रबलित निर्धारण आवश्यक छ। एक यस्तो प्रकाश स्रोत5वर्ग मीटर को क्षेत्र मा आवश्यक छ। एलईडी उपरि छत रोशनी 220V निर्मित मा mains भोल्टेज रूपान्तरण गर्न चालक छन्। अब, धेरै निर्माताहरु मानक एसी पावर गर्न प्रत्यक्ष जडान लागि एक मोडेल बनाउन प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ।
प्रत्येक पाहुना आफ्नो व्यक्तिगत जहाँ राख्न प्राथमिकता र कसरी चलानी downlight एलईडी चयन गर्न। यो बावजुद, यो सामान्य नियम अनिवार्य छन् जो खातामा लिन महत्त्वपूर्ण छ:
सहज प्रकाश एक शक्ति एलईडी दीपक 2-4 डब्ल्यू / m² संग प्रदान गरिएको छ।
बेडरूम रोशनी उज्यालो विसारक संग एउटा सानो चमक प्रयोग।
जीवित लागू संयुक्त भिन्न आवश्यक जहाँ आधारभूत प्रकाश हुन, र अतिरिक्त हाइलाइट केही क्षेत्रहरू र भित्री तत्व अनुमति दिन्छ।
को काम र खाने क्षेत्रमा: भान्सा वा मुख्य प्रकाश बाहेक भोजन कोठा मा दुई महत्त्वपूर्ण क्षेत्रहरू छन्।
हलवे मा उज्ज्वल प्रकाश छैन आवश्यक छ, र त्यहाँ केही spotlights स्थापना गर्न पर्याप्त छ।
उपरि जुडनार को विकल्प
अपार्टमेंट आकर्षक डिजाइन कम शक्ति दीपक लागि उपयुक्त छ। कार्यालय जुडनार पनि कर्मचारी उत्पादकता असर किनभने, प्रकाश अनुरूप हुनुपर्छ। एउटै रंग तापमान मा भित्री प्राकृतिक उपस्थिति विकृत हुँदैन।
को कार्यालय सामान्यतया जुडनार को सख्त फारम प्रयोग गर्न रुचि, तर कोठा आरामदायी खोज्नुपर्छ। परिवर्तन आवश्यक भएमा - उपकरणहरू स्थापना गर्न र आफ्नो स्थान सजिलो हुनुपर्छ।
ऊंचाई उच्च सुविधा र अन्य कडा पुग्न क्षेत्रहरूलाई अक्सर प्रतिस्थापन दीपक समस्या हो। तिनीहरूले सबैभन्दा टिकाउ हुन्, नेतृत्व रोशनी प्रयोग गर्न राम्रो छ।
उपरि spotlights स्थापना
दीपक सबै सामान संग बेचिन्छ। उपकरणहरू निम्न तत्त्वहरू समावेश:
निम्नानुसार plasterboard छत मा स्थापना अनुक्रम छ:
पूर्व-ताराहरु को दीपक एकाइ को ठाउँमा गरेको छ। तार समाप्त खोसिएर नाङ्गै छन् र पूर्व-पृथक। स्थापना समयमा प्यानल र शक्ति स्विच मा लाइन मा स्वचालित प्रकाश बन्द हुनुपर्छ।
एक चिन्ह को छत यसको आकार मिल्दाजुल्दा उपरि दीपक गर्न प्वाल कटौती गरिएको छ।
शक्ति कर्ड हटाइयो।
प्लेट माउन्ट छत मा स्थिर छ र जमीन यो जोडिएको छ। मार्फत टर्मिनल ब्लक शक्ति केबल जडान। यो अवलोकन गर्नुपर्छ रंग coded (नीलो - शून्य, सेतो - चरण, पहेलो हरियो - भूमि)।
तार सफासँग स्ट्याक र दीपक आवास माउन्ट प्लेट को पक्ष गर्न स्क्रू द्वारा निश्चित छ। बन्धन विधि फरक हुन सक्छ।
माउन्ट दीपक। यो luminaire देखि अलग बेचिएको छ। यो क्यासेट टोपी मेल महत्त्वपूर्ण छ।
को निलम्बित छत मा झाड को स्थापना
भारी दीपक जसको वजन5भन्दा किलो सीधा plasterboard वा MDF प्यानल बनेको गलत छत संलग्न हुन सक्छ। सामान्यतया, यो भारी शक्तिशाली कार्यालय प्रकाश र झाड। सबैभन्दा विश्वसनीय तरिका काठ वा ठोस आधार गर्न झाड झुन्डिएको छ। यो मुख्य छत बंधक काठ तत्व भएको माउन्ट कोष्ठ त्यसको fastened छ गर्न पूर्व-संलग्न। पट्टी प्वाल drilled र बिजुली आपूर्ति लागि तार बित्यो।
को निलम्बित छत स्थापना भएको छ भने, यो झूमर जडान लागि जो भित्र कटौती गर्दै प्वालहरू चिपके termokoltsa।
बढते प्लेट स्क्रूड स्क्रू संग काठ बारहरू द्वारा। यो माउन्ट दृढता खन्नु मार्फत स्क्रू संग निश्चित छ।
ध्यान! छत सुत्छन् गर्न उपयुक्त सदस्य उचाइ वेब को स्तर मा हुनु पर्छ। छत तिनीहरूलाई प्रत्येक लागि पट्टियाँ र उत्पादन तार बन्धन छुट्टै हे-घन्टी तयारी गर्नुपर्छ लागि केही प्वालहरू बनाउन अपेक्षित छ भने।
माउन्ट जुडनार को निलम्बित छत मा वर्णन गरिएको के निर्माण र मर्मत को एक विचार भइरहेको, तपाईंको आफ्नै हातले गर्न सकिन्छ। विशेष सरल र सजिलो बिल छत दीपक एलईडी प्रयोग गर्न। यसलाई आफ्नो स्थापना पूरा गर्न नियम अनुसार महत्त्वपूर्ण छ र बिजुली सुरक्षा बारे भूल छैन।
संवहन - भान्सा मा मदत छ
तीन-चरण मोटर जडान
एक चौतर्फी के हो? आफ्नो फोन को लागि चौतर्फी। चौतर्फी क्यामेरा। फिस्सिलेन्स
आफ्नो घर को लागि एक dehumidifier कसरी चयन गर्न। Dehumidifiers घरेलू: समीक्षा, मूल्यहरू
Smartwatch सैमसंग गियर S2। अवलोकन र स्थिति
कति गर्दछ फ्रीजर "अटलान्टा"?
"साम्राज्य" रेस्टुरेन्ट (ऊफा) - "चरा" उच्च-उडान!
Alina Kukushkin: जीवनी, को animated श्रृंखला मा काम "Masha र भालु"
Pendikovskoe ताल: वर्णन, बिदा, फोटो
के विशिष्टीकरण अनुबंध छ
भगवान गणेश (यो हात्ती)। हिन्दू धर्म, बुद्धि र समुन्नतिको भगवान मा
ब्लूबेरी र Blackberries - फरक के? जामुन असामंजस्य
के यदि कुलपति आफ्नो कम्प्युटरबाट सबै ब्राउजर खोल्न गर्दैन?
Potemkin गाउँमा - भ्रम वा वास्तविकता?
रक्सी "Dolce Vita" - मिठाई जीवन
एक असाधारण सफल अवकाश: भियतनाम। अनुभवी पर्यटकहरूको सम्झनाले तपाईंलाई झूटो गर्दैन
माछा मार्ने। Bombardier मा पक्रने